यसरी चम्किनेछ तपाईको अनुहार - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यसरी चम्किनेछ तपाईको अनुहार
प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०७४, मंगलवार
भदाै २०, असनेपाल न्युज । यदि कुरुप हुने गरी डन्डिफोर आएको छ भने दिनमा तीन पटकसम्म अनुहार सफा पानीले धुने, डन्डिफोरलाई ननिचोर्ने, दैनिक दुई लिटरभन्दा बढी पानी पिउने, मसलाजन्य परिकारहरु कम खाने गर्नुपर्छ । त्यस्तै मदिरा, चिया, कफी एवं सुर्तीजन्य वस्तुहरुको प्रयोग पनि कम गर्नुपर्छ ।
दैनिक केही समय आराम गर्नुपर्छ । निकै थाकेको अवस्थामा आँखा बन्द गरेर सुत्दा अनुहारमा चमक आउँछ ।
डन्डिफोर हटाउने विभिन्न घरेलु उपायमध्ये कागती पनि एक हो । एउटा कचौरामा कागतीको टुक्रालाई निचोरेर राख्ने अनि कागतीमा गुलाबजल मिसाउने र आवश्यकताअनुसार अनुहारमा लगाउँदा डन्डिफोरबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। यसलाई १५ दिनसम्म नियमित प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ।
डन्डिफोर हटाउने अर्को घरेलु उपायमा कागती, काँक्रो र दूधलाई पनि लिन सकिन्छ। यी तीनै वस्तु दैनिक प्रयोगमा आउने वस्तु हुन्। कागतीको एक चौथाइ भागलाई काट्ने र काँक्रोलाई राम्रोसँग मिक्सचरमा पिसेर राख्ने र दूधलाई नतताई यी तीनै वस्तुलाई मिसाएर अनुहारमा लगाउ“दा छालाको रक्षाका साथै डन्डिफोर निर्मूल हुन्छ।
यदि सुख्खा र चिसो हावामा लगातार हिँडिएको छ भने यसले पनि अनुहारको चमक हराउने सम्भावना हुन्छ। आलु घोटेर अनुहारमा दल्ने हो भने अनुहार सुख्खा हुने तथा डन्डिफोर आउने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ।
यदि छाला सामान्यजस्तो छ भने मह र दुध मिसाएर लगाउँदा अनुहारमा चमक आउनुका साथै विभिन्न समस्याबाट टाढा रहन सकिन्छ।
यदि छाला चिल्लो छ भने बेसनको पीठो का“चो दूधमा मिसाएर लगाउँदा पनि अनुहारको सुरक्षा हुन्छ। गहुँको छोक्रामा काँचो दुध र मह मिसाएर लगाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ । एजेन्सी
जीवन के हो ? जीवनलाई सुखी र सफल चाहानु हुन्छ ? पालना गर्नुहोस् बुद्धका यी नियम
काठमाडौं । जीवन एक कला हो, त्यसमा हाम्रो जन्म पहिलो कला हो भने जीवन दोश्रो कला हो । पहिलो कला सृष्टि हो । […]
शुक्र र वृहस्पति ‘अस्त’मा किन गरिँदैन नयाँ धार्मिक शुभकार्य,उदय-अस्त कसरी?
काठमाडौं । सनातन धर्ममा विशेषगरी वृहस्पति र शुक्र ग्रह अस्त भएका वेला मांगलिक कार्यहरू गरिँदैनन्। अहिले […]
भिक्षा पात्रको रहस्य:एउटा भिक्षा पात्र जसलाई राजाले भर्न सकेनन्
काठमाडौं । एक राजाको दरबारमा साधु पुगे । राजाले साधुको यथोचित सम्मान गरे अनि दरबारमा आउनुको प्रयोजन सोधे । […]
वर्षायाममा के खाने के नखाने ? यसरी जोगिनुहोस् अनेक रोग र महामारीवाट
काठमाडौं । मनसुन सुरु भइसकेको छ । स्वास्थ्य यसको अर्को जोखिमपूर्ण पाटो हो । हरेक वर्षायाममा अनेक रोग र […]
एडेलेडमा अध्यात्म चिकित्सा विज्ञान सहितको उत्प्रेरणा साँझ सम्पन्न
असनेपालन्युज । एडेलेड। उत्प्रेरणा र योग सहितको एक जागरण कार्यक्रम एडेलेडमा सम्पन्न भएको छ । हास्य , संगित,र […]
आठ घण्टाभन्दा कम सुत्नेलाई मानसिक समस्याको खतरा
दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवं निराशा (डप्रेसन)को समस्या देखिएको एक […]
‘नेपाल बन्द’ सकिएपछि विप्लवले गरे नयाँ संघर्षको आह्वान ! के छ अबको तयारी ?
चर्चित तीन गुण्डा नाइके एउटै कारागारमा,ठेकेदार र व्यापारीमाथि निरन्तर धम्की
भीभीआइपीलाई किनेको हेलिकप्टरमा साढे १४ करोड नोक्सानी
सलमान खानको यो ट्वीटले संसारभरी यसरी भयो हंगामा !
नेपाली इतिहासकै अत्यन्तै दुर्लभ:पहिलो स्याटलाइट ‘स्याट-१’ अमेरिकाबाट प्रक्षेपण